Fa maninona no miteraka resabe ny milim-pandrotsaham-bato any RDC? · Global Voices teny Malagasy
Fa maninona no miteraka resabe ny milim-pandrotsaham-bato any RDC?
Voadika ny 21 Avrily 2018 5:58 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français
Pikantsarin'ny milim-pandrotsaham-bato any RDC via Congo Bopeto TV
Nanapa-kevitra ny hampiasa “milim-pandrotsaham-bato” (milim-pifidianana?) ny fanjakana hiomanana amin'ny fifidianana kasaina hatao ao RDC amin'ny volana desambra ho avy izao. Niteraka tsikera maro, tao amin'ny firenena sy iraisampirenena, noho ny fihenjanan'ny toe-draharaha politika izany safidy izany.
Hiditra amin'ny fifidianana lehibe (ankapobeny) ny Repoblika Demaokratikan'i Congo (RDC), faharoa midadasika indrindra eto Afrika amin'ny velarantany tsy latsaky ny 2,3 tapitrisa km². Mialoha ny fifidianana, manondro ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana kongoley (Céni) fa mihoatra ny 45 tapitrisa ny isan'ny mpifidy – izany isa izany fotsiny dia efa fanamby iray. Ankoatra izany, ny fandrotsaham-bato izay hotontosaina amin'ny faha-23 desambra ho avy izao dia tsy indray mandeha fa in-telo be izao (filoha, mpanao lalàna, ary faritany). Navondrona tokoa izy telo ireo rehefa nahemotry ny fitondrana hatrany.
Hotontosaina ao amin'ny firenena iray tsy mba nahalala tetezamita milamina hatramin'ny nahazoany fahaleovantena tamin'ny taona 1960 ireo fifidianana ireo. Etsy andaniny, mihenjana tanteraka ny toe-draharaha politika amin'izao fotoana izao, taorian'ny famoretana nampisy ra mandriaka avy amin'ny fihetsiketsehana lehibe nokarakarain'ny mpanohitra sy ny Fiangonana mba hanoherana ny fitazonan'i Joseph Kabila ny fahefana na dia efa tapitra aza ny fehim-potoana fiasany. Azo lazaina fa avo ny fanamby. Izany no antony nahatonga ny governemanta hanapariaka ‘milim-pandrotsaham-bato’ tsy latsaky ny 60 000 manerana ny firenena kongoley.
Ny fampidirana ny milim-pandrotsaham-bato
Natolotry ny mpitondratenin'ny Céni, Jean-Pierre Kalamba, ho ‘milina manamora zavatra’ sy ‘mampihena ny masonkarena’ -n'ny fifidianana ireo milina ireo tamin'ny nampisehoana azy teo anoloan'ny mpanao gazety tamin'ny 21 febroary. Avo lenta ireo milina namboarina tany Korea Atsimo ireo noho ny fananany efijery azo baikoan-tanana (tactile). Toy izao ny fomba fiasany : tonga ny mpifidy iray ary mifantina ny kandidà eo amin'ny efijery noho ny fisian'ny sarin'ireo kandidà ireo (tsy azo tsinontsinoavina ny isan'ny Kôngôley mpifidy tsy mahay mamaky teny sy manoratra). atontan'ny milina pirinty avy eo ny anarana telo nosafidiana ao ambadiky ny biletà, ka iny no aforitry ny mpifidy ary arotsany ao anaty vatam-pifidianana.
Izany hoe biletà tokana amin'ny fifidianana telo izany iny, ary raha elekitrônika (nomerika) ny fandrotsaham-bato, dia mbola mijanona ho ataon-tanana hatrany ny fanisam-bato :
Manomboka amin'io fotoana io ianao tsy afa-mifidy intsony. Izany hoe tsy misy ny famenoam-bato!
hoy ny horakora-pifalian'i Jean-Pierre Kalamba. Nefa lavitry ny firaisan-tsaina ireo milina ireo. Ny Groupe d’études pour le Congo (GEC), vondrom-pikarohana iray miorina any amin'ny Oniversiten'i New York, ohatra nampitandrina ny amin'ny halafosana tafahoatra amin'ny fanapariahana azy ireo (tokotokony ho 130 tapitrisa euros). Tsikera izay iraisan'ny Fifandaminana Tsy Miankina amin'ny Fanjakana kôngôley miisa anankiroa (FTMF na ONG), AETA sy ODEP.
Mpanohitra tsy resy lahatra
Mijoro manohitra ny milim-pandrotsaham-bato ihany koa ny mpanohitra. Lazainy fa “milim-pangalaram-bato” ireo – ahiahy tsy voatery ho tsy mitombina raha jerena ny mety ahafahana mangalaram-bato aminy. Mety ho mora ambakaina ireo mpifidy any ambanivohitra mbola tsy zatra ireo teknolojiam-baovao. Tamin'izany, nanao fanambarana iraisana ireo antoko mpanohitra lehibe (MLC, UNC, CNB ary UDPS) tamin'ny alarobia. Nosoritan'i Felix Tshisekedi avy ao amin'ny UDPS sy i Pierre Lumbi filoha-lefitry ny Fiarahana ho amin'ny fanovana, antokon'i Moise Katumbi « ny di-dohan'ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny fifidianana, Céni, hampiasa io teknolojia io ».
Manitsakitsaka ny Lalampanorenana ny Milim-pandrotsaham-bato, izay mitaky fifidianana malalaka, mangarahara ary miafina
hoy ny fanombanan'i Eve Bazaiba, sekretera jeneralin'ny Hetsi-Panafahana an'i (ny antoko mpanohitra lehibe indrindra natsangan'ny governora Moïse Katumbi teo aloha lasa an-tsesitany). Ity farany ity aza moa miantso ny « fanidiana » ny kaontin'ny orinasa Miru System, izay miandraikitra ireo milina ireo noho ny fanaovana « fifanakalozam-barotra tsy ara-dalàna ». Antso manampy trotraka ny fifanenjanana efa any amin'ny faratampony ao amin'ity firenena izay mbola nijanona teo amin'ny fahefana herintaona mahery taorian'ny nahataperan'ny ny fehim-potoana fiasana farany amin'ny fomba ofisialy ny filoha.
Ahiana hampidi-doza ara-pilaminana
Ny mahavariana, na ny mpanamboatra ireo milina ireo aza tsy nankatoa ny fampiasana azy ireo.
Nanome fanamarihana ho an'ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (Ceni) ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo ny Vaomieram-pifidianan'ny Repoblikan'i Korea Atsimo (NEC) […] fa tsy nanome ary tsy hanome fanohanana ofisialy na fiantohana amin'ny tetikasam-pampidirana rafitra fandrotsaham-bato amin'ny alalan'ny efijery azo baikoan-tanana (TVS) amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ao RDC kasaina hotontosaina amin'ny desambra 2018
hoy ny NEC tao amin'ny fampitam-baovao nomena ny datin'ny 8 avrily. Ho azy, mety hampidi-doza amin'ny filaminan'ny firenena izay efa ao anatin'ny fihenjanana tanteraka ny fampiasana ireo fitaovana ireo.
Naneho ny ahiahiny feno ny NEC (…) noho ny tsy fahatombenan'ny politika sy ny tontolo marefo, toy ny fahalemena na fahavitsian'ny fotodrafitrasa herinjiro sy ny faharatsian'ny lalana, ny taha avon'ny tsi-fahaiza-mamaky teny sy manoratra ary ny toetrandro trôpikaly izay mety hitondra mankany amin'ny tsy fampiasana ny milina araka ny tokony ho izy
hoy ny tohin'ny lahatsoratra. Ahiahy izay valin'akon'ahiahin'ny ambasadaoron'i Etazonia eo anivon'ny Firenena Mikambana, Nikky Haley. “Mety hampidi-doza tanteraka” ny fampiasana ireo fitaovana ireo ary maniry i Etazonia ny hampiasana « ny vato taratasy mba tsy hisy ny fisalasalana eo amin'ny voka(-pifidianana) », hoy ny fanazavany tamin'ny 12 febroary.
2 herinandro izaySodàna